Naleo tokoa natao birao
2007-06-20 @ 15:40 in Andavanandro
Izay mipetraka na mandalo matetika any 67ha eo akaikin’ny fiantsonan’ny fiara mankany Ambohitrimanjaka iny dia efa mety ho lasa saina ihany amin’ity trano vita tsy mety misy mipetraka ity. Trano vaventy sy avo ihany misy rihana efatra raha tsy diso ny fitadidiako. Mifanila indrindra amin’ny Madahotel ary ambadiky ny fiangonana katolika romana Maria manjaka 67ha, manoloana ny arabe lehibe mampisaraka ny 67ha avaratra amin’ny atsimo amin’ny ankapobeny no misy ity trano lasa birao ity. Tokanana atao birao fandraharahana momba ny fakana hetra (Direction Generale des Impots) ity trano lehibe ity. Nafindra ho ao ny birao teny Faravohitra sy ny toeran-kafa izay tsy tadidiko.
Mpandalo eo aho ka hitantara ny momba azy ity hatramin’ny niorenany. Trano fampanantenan’ny filoha Didier Ratsiraka ka anisan’ny nahatafaverina azy teo amin’ny fitondrana ity trano ity. Nifanaraka taminy ny Seimad fa hanangana trano 35 000 isan-taona izy. Rehefa nandray indray ny fahefana ary ny lehilahy dia nanao io trano io ho ohatra amin’ny trano hafa rehetra izay mety mbola haorina. Dia nasaina nisoratra anarana avokoa izay rehetra mitady trano ka afaka mividy avy hatrany izay vita. Nifandrombahana mihitsy izany fisoratana anarana izany.
Somary elaela (roa sa telo taona) teo ho eo vao vita ny trano. Nandrasan’ny maro amin’izay hoe iza sy iza avy ary ny tsara vintana ka nahazo ampahany ipetrahana amin’ity trano ity. Efa nalaza moa fa efa misy tompony avokoa ireo efitra rehetra amin’ity trano vaventy ity. Jerena ka tsy misy mipetraka hatrany ny trano. Niongana ihany ilay filoham-pirenena fa tsy hita izay hipetraka amin’ny trano. Gaga tsy sahy nifanontany loatra ny olona mahita ity trano tsy misy mipetraka nefa tsara tarehy ange e! Dimy taona mahery io izany foana fotsiny.
Na dia tsy misy mipetraka aza ny trano dia misy mpiambina ihany izy io. Ary ambolana aza izay dia vao novolena fefy rindrina sy vy izay lafo vidy mihitsy amin’izao fotoana izao (satria be mpitady na ampiasaina eto an-toerana na aondrana any ivelany). Dia niandry indray ny olona hijery ireo hahazo ny trano. Rehefa tonga ny alina dia efa fijorojoron’ny mpivarotena eo anoloany ary izay mifanaraka amin’izy ireo dia miditra any anaty fefy any ka mankany ambadiky ny trano na mamonjy ny lalantsarany (tsy fantatro loatra tsinona izay tena marina moa izaho rahateo tsy hanontany izany). Izany hoe efa vita ny fifanarahana teo amin’ireo mpijorojoro sy ny mpiambina ity toerana ity. Kanjo izao izy ity ka noraisina hatao biraon’ny mpaka hetra.
Izao manko no mahalasa saina ahy. Ny toerana tahaka itony raha vao fanaovana pasazy toy izao dia sarotra ny manakana ny zatra tsy handalondalo ao amin’ny fanaony intsony. Tsy hoe tsy azo tanterahina fa ho sarotra. Mifanahatahaka ity manko ilay tetezana afovoany mampisaraka an’i 67ha avaratra andrefana amin’ny 67ha avaratra atsinanana nanana ny lazany amin’ny fanaovana pasazy ankalamanjana (na dia andro diavolana aza). Fepetra henjana avy amin’ny fokontany 67ha avaratra atsinanana mihitsy (satria faritra ao amin-dry zareo io) sady nasiana fefy hazo avo be sy fandrarana misoratra ary fiambenana tamin’ny fotoanan’ny fanapahan-kevitra vao foana ny mahatoeram-pivarotatena azy. Ity trano lasa birao ity anefa dia tsy hisy olona hiasa alina ao tsinona ka mety hanao ny fifanarahana mahazatra azy ihany ny mpivarotena sy ny mpiambina ny trano.